Nexium vs. Prilosec: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय भारी खेल समाचार कल्याण स्वास्थ्य कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर घरपालुवा जनावर कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी समाचार, कल्याण
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Nexium vs. Prilosec: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
Nexium vs. Prilosec: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
के तपाई मुटुको जलन अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ? यदि हो भने, तिमी एक्लो छैनौ 60 करोड Americans० लाख अमेरिकीहरू महिनामा कम्तिमा एक पटक ईन्टरबर्न अनुभव गर्छन्, र यी बिरामीहरू मध्ये धेरैजसोलाई हरेक दिन ईर्ष्याको लक्षण हुन्छ।
नेक्सियम (एसोमेप्रजोल मैग्नीशियम) र प्रिलोसेक (ओमेप्रजोल मैग्नीशियम) दुई औषधि हुन् जुन प्रोटोन पम्प अवरोधकर्ता, वा पीपीआई भनिन्छ। पीपीआईहरू अवरोध र कम एसिड उत्पादन द्वारा काम गर्दछ, यसैले रोक्दै ईर्ष्या र एसिड नियन्त्रण प्राप्त गर्दै।
यी औषधिहरू एफडीएद्वारा अनुमोदित छन्। तिनीहरू ग्यास्ट्रोइफोगेल रिफ्लक्स रोगका लक्षणहरू र अन्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अवस्थाहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि दुबै नेक्सियम र प्रिलोसेक पीपीआई हो, तिनीहरूको केहि भिन्नताहरू छन्, जुन हामी तल छलफल गर्दछौं।
Nexium र Prilosec बीचको मुख्य भिन्नताहरू के के हुन्?
नेक्सियम (नेक्सियम भनेको के हो?) यसको एसोमेप्रजोलको जेनेरिक नामबाट चिनिन्छ, र प्रिलोसेक (प्रिलोसेक भनेको के हो?) ओमेप्रजोलको जेनेरिक नामबाट चिनिन्छ। जेनेरिक नामहरू एक कारणको लागि उस्तै आवाज लाग्दछ — एसोमेप्रजोल ओमेप्राजोलको रासायनिक आइसोमर हो। दुबै औषधि एकै रसायनको बनेर बनेका छन् तर फरक तरीकाले व्यवस्थित छन्।
दुबै नेक्सियम र प्रिलोसेक ब्रान्ड र जेनेरिकमा उपलब्ध छन्, र प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स र ओभर-द-काउन्टर Nexium OTC र Prilosec OTC को रूपमा। खुराक र उपचारको लम्बाइ उमेर र अवस्था अनुसार फरक हुन्छ।
Nexium र Prilosec बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग प्रोटोन पम्प अवरोधक (पीपीआई) प्रोटोन पम्प अवरोधक (पीपीआई)
जेनेरिक नाम के हो? एसोमेप्राझोल म्याग्नेशियम ओमेप्रजोल मैग्नीशियम
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? Rx: ढिलाइ-रिलीज क्याप्सूल, निलम्बन, प्याकेट, इंजेक्शन
OTC: क्याप्सूल, मिनी क्याप्सूल, ट्याब्लेटहरू Rx: ढिलाइ-रिलीज क्याप्सूल, निलम्बन
OTC: ढिलाइ-विमोचन ट्याब्लेटहरू
मानक खुराक के हो? संकेत द्वारा भिन्नता: सामान्यतया २०--40 मिग्रि एक पटक वा दुई पटक (वयस्क खुराक) संकेत द्वारा भिन्नता: सामान्यतया २०--40 मिग्रि एक पटक वा दुई पटक (वयस्क खुराक)
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? १० दिनदेखि months महिनासम्म धेरै बिरामीहरूले लामो समय लिन्छन् १० दिनदेखि weeks हप्ता, धेरै बिरामीहरूले यसको लागि लामो लिन्छन्
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र बच्चाहरू वयस्क र बच्चाहरू
Nexium मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
नेक्सियम मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
अवस्था Nexium बनाम Prilosec द्वारा उपचार
नेक्सियम र प्रिलोसेक दुबै गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स रोग (जीईआरडी) को उपचारमा, एच। पाइलोरी उन्मूलनको लागि डुओडेनल अल्सर पुनरावृत्तिको जोखिम कम गर्न, र प्याथोलॉजिकल hypersecretory अवस्थाको लागि प्रयोग गरिन्छ।
नेक्सियम NSAID सम्बन्धित गैस्ट्रिक अल्सरको जोखिम घटाउनका लागि पनि संकेत गरीएको छ।
प्रिलोसेकलाई सक्रिय डुओडेनल अल्सर वा सक्रिय सौम्य ग्यास्ट्रिक अल्सरको उपचार, एसिड-मध्यस्थता गर्डको कारण इरोजिभ एसोफैगिटिस (EE) को उपचार, र एसिड-मध्यस्थता GERD को कारण EE को उपचार को मर्मतको लागि पनि संकेत गरीएको छ।
सर्त Nexium Prilosec
Gastroesophageal भाटा रोग को उपचार (GERD) हो हो
NSAID सम्बन्धित गैस्ट्रिक अल्सरको जोखिम न्यूनीकरण हो अफ-लेबल
एच। पाइलोरी उन्मूलन डुओडेनल अल्सर पुनरावृत्तिको जोखिम कम गर्न हो हो
प्याथोलॉजिकल हाइपरसेक्रेटरी सर्तहरू (जोलिन्गर-एलिसन सिंड्रोम सहित) हो हो
सक्रिय डुओडेनल अल्सरको उपचार अफ-लेबल हो
सक्रिय सौम्य ग्यास्ट्रिक अल्सरको उपचार अफ-लेबल हो
एसिड-मध्यस्थता GERD को कारणले इरोजिभ एसोफेगिटिस (EE) को उपचार अफ-लेबल हो
एसिड-मध्यस्थता GERD को कारण EE को उपचार को रखरखाव अफ-लेबल हो
Nexium वा Prilosec अधिक प्रभावी छ?
मा परीक्षणहरू नेक्सियम mg० मिलीग्राम र प्रिलोसेक २० मिलीग्राम (अन्य पीपीआईको साथ) मानक खुराकको तुलनामा जीईआरडी लक्षणहरू भएका बिरामीहरूमा, नेक्सियमले सबै औषधिहरूमध्ये अत्यधिक एसिड नियन्त्रण प्रदान गर्‍यो। अर्कोमा अध्ययन , नेक्सियमको साथ उपचार गरिएका बिरामीहरूले प्रिलोसेक र अन्य पीपीआई भएका बिरामीहरू भन्दा द्रुत लक्षण राहत महसुस गरे। यद्यपि नेक्सियम अधिक प्रभावकारी हुन सक्छ, दुबै औषधिहरू निर्धारितकर्ताहरू बीचमा प्रख्यात छन्।
सबै भन्दा राम्रो औषधी भनेको एक हो जुन तपाइँको लागि राम्रो काम गर्दछ, कमसेकम साइड इफेक्टको साथ। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्, जसले तपाईंको लक्षण, मेडिकल अवस्था (हरू), र अन्य ड्रग्स जुन तपाईंले Nexium वा Prilosec सँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आधारमा तपाईंको लागि उत्तम औषधि चयन गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
Prilosec मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Prilosec मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
कभरेज र नेक्सियम बनाम प्रिलोसेकको लागत तुलना
दुबै नेक्सियम र प्रिलोसेक सामान्यतया बीमा र मेडिकेयर भाग डी द्वारा कभर हुन्छ। प्राय: प्रिस्क्रिप्शन जेनेरिक संस्करणलाई समाहित गरिन्छ। ओटीसी संस्करणहरू सामान्यतया केही बीमा अन्तर्गत मात्र (एक प्रिस्क्रिप्शनको साथ) कभर गरिन्छ योजना अनुसार योजनाहरू भिन्न हुन्छन्।
जेनेरिक नेक्सियम mg० मिलीग्रामको cap० क्याप्सूलको लागि बाहिरको पकेट मूल्य $ 300 भन्दा बढी हुन सक्छ। तपाइँ सहभागी फार्मेसीहरूमा एकलकेयर कार्ड प्रयोग गरेर $ 50 भन्दा कम तिर्न सक्नुहुन्छ
जेनेरिक प्रिलोसेक २० मिलीग्राम औसत $ $० वा सोभन्दा बढीको cap० क्याप्सूलको लागि बाहिरको पकेटको मूल्य। एकलकेयर ओमेप्रजोल कूपनको साथ मूल्य $ १ at देखि सुरु हुन्छ जुन तपाईं फार्मेसी प्रयोग गर्नुहुन्छ।
सामान्यतया बीमा द्वारा कभर? हो, Rx जेनेरिक रूपमा (सामान्यतया OTC होईन) हो, Rx जेनेरिक रूपमा (सामान्यतया OTC होईन)
सामान्यतया चिकित्सा भाग डी द्वारा कभर? हो, Rx जेनेरिक रूपमा (सामान्यतया OTC होईन) हो, Rx जेनेरिक रूपमा (सामान्यतया OTC होईन)
मानक खुराक उदाहरण: mg० मिलीग्राम क्याप्सूल दैनिक उदाहरण: २० मिलीग्राम क्याप्सूल दैनिक
विशिष्ट मेडिकेयर पार्ट डी कोपे $ १। $ ०- $ २०
एकलकेयर लागत $ 46 $ 9- $ 20
प्रिस्क्रिप्शन कुपन लिनुहोस्
नेक्सियम बनाम प्रिलोसेकको साझा साइड इफेक्टहरू
Nexium को सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्ट पेटको दर्द, पखाला, टाउको दुख्ने, र मतली हो। प्रिलोसेकको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू भनेको टाउको दुख्ने, पेट दुखाइ, पखाला, र मतली हो। दुबै औषधीहरू सामान्यतया राम्रोसँग सहन गरिन्छ।
यो साइड इफेक्ट को पूर्ण सूची छैन। प्रतिकूल प्रभावहरूको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
पेट दुख्ने हो 8.8--5% हो %%
कब्ज हो दुई% * हो दुई%
पखाला हो 3.3% हो %%
मतली हो %% * हो %%
टाउको दुखाई हो 8.8% हो %%
फ्याटुलेन्स हो %% * हो %%
पुराना हो <1% हो दुई%
* प्रतिशत रिपोर्ट गरिएको छैन तर प्रिलोसेकको समान दरमा देखा पर्‍यो
स्रोत: डेलीमेड ( Nexium ), डेलीमेड ( Prilosec )
Nexium र Prilosec को ड्रग अन्तरक्रिया
किनभने नेक्सियम र प्रिलोसेक समान संरचनाहरूसँग समान औषधी हुन्, तिनीहरूसँग समान औषधी अन्तर्क्रिया छ। पीपीआईहरू एन्टिरिट्रोभाइरलहरूसँग लिनुहुन्न। नेक्सियम वा प्रिलोसेकले एटाजानाविर वा नेल्फिनाविरको स्तर घटाउन सक्छ, त्यसैले एन्टिरिट्रोभाइरल ठीकसँग हुँदैन, र अन्तर्क्रियाले ड्रग प्रतिरोधको कारण पनि बनाउन सक्छ। अर्कोतर्फ, पीपीआईको साथ saquinavir लिनु विपरित प्रभाव छ, saquinavir को स्तर बढ्दै, जो विषाक्तता निम्त्याउन सक्छ।
डिक्सोक्सिनको साथ नेक्सियम वा प्रिलोसेकको संयोजनले डिगोक्सिनको स्तर बढाउन र विषाक्तता निम्त्याउन सक्छ। नेक्सियम वा प्रिलोसेकलाई वारफेरिनको साथ ले वारफेरिनको स्तर बढाउन सक्छ, जसले रक्तस्राव वा मृत्युसमेत निम्त्याउन सक्छ। नेक्सियम वा प्रिलोसेकले प्लाभिक्स (क्लोपीडोग्रल), डायजेपाम, सिलोस्टाजोल र अन्य लागूपदार्थसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन्। यो औषधी अन्तरक्रियाको पूर्ण सूची होइन। औषधि अन्तर्क्रियाको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
औषधि ड्रग क्लास Nexium Prilosec
सकिनविर Antiretrovirals हो हो
डिजोक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड हो हो
क्लोपीडोग्रल एन्टी-प्लेटलेट हो हो
सिलोस्टाजोल वासोडिलेटर हो हो
सेन्ट जोन वर्ट CYP3A4 एन्जाइम inducers हो हो
ट्याक्रोलिमस इम्युनोसप्रेसन्ट हो हो
सर्टलाइन SSRI antidepressant हो हो
Nexium र Prilosec को चेतावनी
जहाँसम्म पीपीआईले लक्षण राहत दिन सक्छ, त्यहाँ अझै पनि एक घातक हुन सक्छ। परीक्षणको आवश्यकताको बारेमा तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
मृगौला समस्या कुनै पनि समयमा हुन सक्छ। यदि किडनी समस्या देखा पर्दछ भने पीपीआई बन्द गर्नुपर्दछ।
पीपीआईले क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल-सम्बन्धित डायरियाको जोखिम बढाउन सक्छ। बिरामीहरूले सबैभन्दा छोटो समयको लागि कम खुराक लिनु पर्छ।
पीपीआई हड्डी भ f्ग (हिप, नाडी, वा मेरुदण्ड) को साथ सम्बन्धित हुन सक्छ। जोखिम अधिक डोजसँग बढी हुन्छ, त्यसैले बिरामीहरूले सबैभन्दा कम प्रभावी अवधिको लागि पीपीआईको न्यूनतम खुराक लिनुपर्दछ।
कटानियस ल्युपस एरिथेमाटोसस (सीएलई) र सिस्टिमिक ल्युपस एरिथेमेटोसस (एसएलई) पीपीआई लिने बिरामीहरूमा रिपोर्ट गरिएको छ।
दीर्घकालीन उपचार (years बर्ष भन्दा बढी) ले बी -१२ को अभाव निम्त्याउन सक्छ।
कम म्याग्नेशियम (लक्षण बिना वा बिना) देखा पर्न सक्छ। यो दुर्लभ छ र सामान्यतया बिरामीहरूमा देखा पर्दछ जसले एक बर्ष भन्दा बढि पीपीआई लिएका छन्। म्याग्नीशियम स्तरहरूको अनुगमनको बारेमा तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
पीपीआई प्रयोग कोष ग्रन्थी polyps को एक जोखिम संग सम्बन्धित छ, र जोखिम दीर्घकालीन प्रयोग संग बढ्छ। बिरामीहरूले छोटो अवधि सम्भवको लागि पीपीआई लिनुपर्दछ।
नेक्सियम बनाम प्रिलोसेकको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
Nexium के हो?
नेक्सियम, वा एसोमेप्रजोल, एक प्रोटन पम्प अवरोधक (पीपीआई) हो एसिड भाटा र अन्य जठरांत्र (जीआई) सर्तहरूको लक्षणहरूको उपचार गर्न।
Prilosec के हो?
प्रिलोसेक, वा ओमेप्रजोल, एक पीपीआई हो जुन एसिड रिफ्लक्स र अन्य GI सर्तहरूको लक्षणहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
Nexium र Prilosec उस्तै हो?
नेक्सियम र प्रिलोसेक ड्रग वर्गमा छन् प्रोटोन पम्प अवरोधकर्ताहरू भनिन्छ र धेरै समान छन्। वास्तवमा तिनीहरू एक अर्काको रासायनिक आइसोमरहरू हुन्। तपाईले सुन्नु भएको पीपीआई कोटीमा अन्य औषधीहरूले एसिफेक्स (रबेप्रजोल), प्रोटोनिक्स (प्यान्टोप्राजोल), र प्रीभासिड (लान्सोप्रजोल) समावेश गर्दछ। पीपीआईहरू एच २ ब्लकरहरूसँग भ्रममा पर्नु हुँदैन, जीईआरडीका लागि प्रयोग हुने हार्टबर्न ड्रग्सको अर्को कक्षा, जसमा पेप्सिड (फमोटोडाइन) समावेश छ।
Nexium वा Prilosec राम्रो छ?
दुबै औषधिहरू GERD र अन्य GI सर्तहरूको उपचारमा प्रभावकारी छन्। त्यहाँ केहि अध्ययनहरू छन् (माथिको हेर्नुहोस्) जसले नेक्सियम अधिक प्रभावकारी हुन सक्छ र प्रिलोसेक र अन्य पीपीआई भन्दा छिटो काम गर्दछ। यद्यपि दुबै औषधिहरू धेरै लोकप्रिय छन र राम्रोसँग सहि छन्।
के म गर्भवती हुँदा Nexium वा Prilosec प्रयोग गर्न सक्छु?
सामान्यतया भन्नको लागि पर्याप्त जानकारी छैन यदि तपाईं Nexium वा Prilosec लिन सक्नुहुन्छ भने गर्भवती । तपाईको OB-GYN बाट परामर्श लिनुहोस् कि यो Nexium वा Prilosec लिन सुरक्षित छ यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ। यदि तपाईं पहिले नै यी औषधीहरू मध्ये एउटा लिइरहनुभएको छ, र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भन्ने फेला पार्नुभयो भने, निर्देशनका लागि तपाईंको OB-GYN बाट परामर्श लिनुहोस्।
के म Nexium वा Prilosec रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
को लागी चिकित्सा जानकारी Nexium र Prilosec रक्सीको खास रूपमा उल्लेख गर्दैन। जे होस्, मदिराले GERD र अन्य GI सर्तहरूको लक्षणहरू बिगार्न सक्छ। तपाइँको स्वास्थ्य अवस्था (हरू) को साथ रक्सी पिउन सक्नुहुन्छ कि सक्दैन भनेर तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग सल्लाह लिनुहोस्।
Nexium का खराब साइड इफेक्टहरू के के छन्?
नेक्सियम प्रायः बिरामीहरूमा सहिष्णु हुन सक्छ। नेक्सियमको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू भनेको टाउको दुखाइ, मतली, पेट दुख्ने, र पखाला हो।
के Nexium दैनिक लिन सुरक्षित छ?
नेक्सियम हरेक दिन लिन्छ (कहिलेकाँही दिनमा दुई पटक), र उपचारको लम्बाई १० दिन देखि छ महिनासम्म फरक हुन्छ। यद्यपि केही बिरामीहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको निर्देशनका आधारमा यसलाई six महिना भन्दा बढी लिन सक्दछन्।
के Prilosec एसिड भाटा को लागी राम्रो छ?
हो, Prilosec एसिड भाटा को लागी एक राम्रो विकल्प हो। मा क्लिनिकल अध्ययन , Prilosec ले अल्सरलाई निको पार्न र लक्षणहरू सुधार गर्न मद्दत गर्‍यो।
म नेक्सियमको सट्टा के लिन सक्छु?
Nexium को समान श्रेणीमा अन्य ड्रग्समा Prilosec, प्रोटोनिक्स , Prevacid , र Aciphex। सिफारिसको लागि तपाईंको हेल्थकेयर प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस् यदि Nexium ले तपाईंको लागि काम गरिरहेको छैन।
तपाईंको लक्षणहरूको लागि पीपीआई वा अन्य औषधी लिनुको साथसाथै तपाईं आहार परिवर्तन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। एसिड घटाउन मद्दत पुर्‍याउने केहि खानाहरू केरा, खरबूज, सम्पूर्ण अन्न, दही, दुब्ला प्रोटिन, र हरियो तरकारीहरू (शतावरी, काला, पालक, ब्रसेल्स अंकुरित) हुन्।
साथै, फ्राईडेड, फ्याट बढी, वा मसलादार खानेकुराबाट बच्न कोसिस गर्नुहोस्। अन्य जटिल खाद्य पदार्थ र पेयबाट बच्न अनानास, सिट्रस फल / रस, टमाटर / टमाटर उत्पादनहरू, लसुन, प्याज, मदिरा, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, कफी, चिया, चकलेट, र पुदीना समावेश छ। खाना डायरी राख्दा तपाईंलाई कुन भोजन र पेय पदार्थले तपाईंको लक्षणहरूलाई मद्दत गर्दछ वा चोट पुर्‍याउँछ त्यसलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
कुनै स्वास्थ्य बीमा छैन र एक डाक्टर हेर्न आवश्यक छ
चिन्ता र आतंक हमला उस्तै छ
निम्न मध्ये कुन एक अनुसूची iv नियन्त्रित पदार्थ हो?
कसरी खमीर संक्रमण बाट खुजली राहत गर्न
तपाइँ seroquel को लागी एक औषधि परीक्षण फेल गर्न सक्नुहुन्छ